Xeer Ilaaliyihii Maxkamada Gobbolka Sool oo lagu toogtay Magaalada Laascaanood | KEYDMEDIA ONLINE
Xeer Ilaaliyihii Maxkamada Gobbolka Sool oo lagu toogtay Magaalada Laascaanood
Laascaanood (Keydmedia) - Kooxo hubeysan ayaa xalay fiidkii magaalada Laascaanood ku toogtay xeer ilaaliyihii Maxkamada gobbolka Sool, ayadoona kooxihii dilka geystay ay warar kala duwan ka soo baxayaan in gacanta lagu dhigay iyo in kale.
Allahaa u naxariistee Axmed Aw Maxamuud Xaaji Cali waxaa ay kooxaha hubeysan xalay ku toogteen goob makhaayad ah oo lagu shaaho abaaro 9:30-kii fiidnimo ee ay xalay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in qaar kamid ah kooxihii dilka geystay ay gacanta ku dhigeen Ciidamada amaanka Laascaanood, inkastoo ay jiraan warar kale oo sheegaya in kooxaha dilka geystay ay baxsadeen.
Dilalka noocaan oo kale ah ee loo geysanaayo dadka wax galka ah ee magaalada Laascaanood ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka jiray gudaha Laascaanood hasayeeshee sanadkii ugu dambeeyay waa ay joogsadeen, waxaana muuqata in hadda ay dib u bilowdeen dilalkaasi.
Eebe ha u naxariistee Axmed Aw Maxamuud Xaaji Xeer ilaaliya xalay la toogtay ayaa noqonaya kii 9-aad oo lagu toogto gudaha magaalada Laascaanood.
Maxamuud Cali Geelle Gudoomiyaha Gobolka Sool waxaa uu sheegay in Ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigeen nin cararaya, oo aan wax hub ah wadan, oo markii ay eryanayeen kadib soo qabteen sida uu yiri.
Qeybaha kala duwna ee bulshada ku dhaqan Laacaanood ayaa si weyn u cabmbaareeyay dilkaasi xalay loo geystay Xeer ilaaliyihii Maxkamada gobbolka Sool.
Keydmedia.net - Xafiiska, Hargeysa